အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: တကယ်ကို မျက်စိဝေဒနာများ ကုသပေးနိုင်ပါစေ။
တကယ်ကို မျက်စိဝေဒနာများ ကုသပေးနိုင်ပါစေ။
by Daw Sandar Min (Shwee)
ကျန်းမာရေးဒုတိယ၀န်ကြီးကပြောပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးများ၌ အတွင်းတိမ်လူနာများအား ခွဲစိတ်ကုသဆောင်
လစဉ်/အပတ်စဉ် မျက်စိဝေဒနာရှင်များအား စောင့်ရှောက်ပေးနေပါတယ်တဲ့ ???
မျက်မမြင်ကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်တဲ့ ???
ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းများတွင် မျက်စိရောဂါကို ကာကွယ်ရေးအတွက်တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်တဲ့ ???
၎င်းအဆိုများ အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့် အခြားဒေ
သရှိ ပြည်သူများ၏ မျက်စိဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို အတည်ဖြစ်
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:16 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook